I-Apple Pie Cookies Recipe - Ungadliwa
yi-ricotta ushizi njenge-cottage shizi
chitha ngamasenti yenkukhu namadombolo
ukhilimu wesobho lamakhowe nelayisi
Amakhukhi we-Apple Pie
Kulungile, into yokuqala okufanele ngikutshele yona ngaphambi kokuthi ngingene kulokhu… lawo ma-apula asesithombeni… angabokuqala ukusukela esihlahleni sethu esincane esisha sama-apula ngakho ngiyaziqhenya ngabo. Sicela ume ubathande isikhashana. Ngiyabonga.
Kulungile, lawa amakhukhi athandeka kakhulu… ophaya? pookies? Angazi kodwa zinhle kakhulu futhi ngibe nokuqhuma okuzenzayo. Kumele ngikutshele ukuthi angiyena umthandi wepayi, angikaze ngibe .. kodwa ngangizithanda kakhulu lezi! Futhi ungakhathazeki, uma ungakaze wenze uqweqwe lwe-lattice, kulula. Uma ukwazi ukwaluka, ungenza uqweqwe lwelithi! Ngihlanganise isifundo sokuthi labo abadinga ukuvuselelwa!
Njengoba ngikhuthazwe yiBuild Buttercream's Amakhukhi we-Blueberry Pie , Ngenze lawa ma-Apple Pie Cookies ngamunye ngamunye, kamuva ngathola indlela engcono yokwenza amakhukhi afanayo amnandi ngokushesha okukhulu! Udinga ukuya phambili bese uvakashela u-Amy ku- O, ilume ukubona ukuthi uwahlanganisa kanjani amakhukhi akhe. (Ngenkathi ulapho, qiniseka ukuthi uyama bese uyabheka!)
REPIN APPLE PIE AMAKHUKU
Ungayenza kanjani i-Lattice Crust !<– Pin that too!
Uma i-apula akuyona into yakho, yishintshe ngokugcwalisa ama-blueberry noma ama-cherry pie. Ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngokubeka imali nokonga imali kodwa ngicela uthenge ukugcwaliswa kwephayi lomkhiqizo uma uthola i-apula… ngibe nomkhiqizo wesitolo (hhayi owodwa nje) futhi akufani nje! Ngakho-ke, uma uzoqhuma kancane, lena indawo enhle yokukwenza!
Noma okungcono kakhulu… Yenza Ukugcwaliswa Kwakho Kokwenza Upayi we-Apple !! Delish futhi kulula!
Lokhu bekukuhle ngokwengeziwe ngopopi omncane kakhilimu ophehliwe njengoba besibapha… kodwa-ke vele ukugqoke kahle njengoba ukhonza! Lawa makhukhi ophaya we-apula nakanjani ajabulisa isixuku!
Izinto ozozidinga zalesi iresiphi
* Ukugcwala uPhayi * Ukugcwalisa uPhayi we-Apple * Iphepha Lesikhumba *
Isikhathi sokulungiselelaamashumi amabili imizuzu Isikhathi Sokupheka12 imizuzu Isikhathi Esiphelele32 imizuzu Izinkonzo18 amakhukhi ophaya UmbhaliUHolly Nilsson Kulungile, lawa amakhukhi athandeka kakhulu… ophaya? pookies? Angazi kodwa zinhle kakhulu futhi ngibe nokuqhuma okuzenzayo. Kumele ngikutshele ukuthi angiyena umthandi wepayi, angikaze ngibe .. kodwa ngangizithanda kakhulu lezi! Phrinta Phina
▢1 ibhokisi ilungele ukusebenzisa uqweqwe lukaphayi Ingqikithi yama-crust ama-2 (Ungasebenzisa uqweqwe lukaphayi olwenziwe ngokwakho uma uthanda)
▢1 can ukugcwaliswa kophaya we-apula noma ukugcwalisa uphaya wehhabhula elenziwe ekhaya
▢1 iqanda elimhlophe
▢1-2 wezipuni amakristalu amakhulu kashukela ushukela ojwayelekile uzosebenza futhi (ngokuzithandela)
Susa ama-pie crusts bese uvumela ukuhlala imizuzu engu-15 ngemiyalelo yebhokisi. Beka iphepha lesikhumba bese uqaqa ama-pie crusts. Ngisebenzisa umsiki wombuthano ongu-2.75,, sika imibuthano kwesinye sezikhonkwane (ngenze eziyi-14 futhi ekugcineni ngenza ezinye ezimbalwa ngokusalela). Ungasonga kabusha okusikiwe ukwenza imibuthano eminingi. Umfundi wethu uJulie uphakamise ukusebenzisa ikani ekugcwalisweni kophayi njengomsiki !! Yeka umbono omuhle!
Sika imichilo (approx ¼ ″ noma ijiye ngendlela ongathanda ngayo) ukuphuma koqweqwe lukaphayi lwesibili. (Ngisebenzise isondo khekhe ukubenza babe bahle).
Vula ikani lokugcwaliswa kophayi bese ulithululela ebhodini lokusika. Dice ama-apula abe yizicucu ezincane.
Faka isipuni esingu-1 sokugcwalisa uphayi embuthanweni ngamunye (ungahle ushiye okunye). Usebenzisa imichilo yamakhekhe owasikayo, uwafake ngaphezulu kombuthano ngamunye ukudala i-lattice. Bheka indlela yokwakha okokufundisa kwe-Lattice Crust lapha
Uma i-lattice isiqediwe, sebenzisa i-cutter cutter efanayo ukuze unciphise ama-pastry pastries. Ngisebenzise imfoloko yengane ukudala idizayini emaphethelweni. Shayela uqweqwe lwekhukhi ngalinye ngeqanda elimhlophe bese ufafaza ushukela.
Beka ishidi lekhukhi eligcwele iphepha lesikhumba bese ubhake imizuzu eyi-12-16 noma kuze kube nsundu.
Umsiki wami wayengu-2.75 ″ kepha uma unesikhala esisodwa (2.5-3 ″) kufanele sisebenze kahle nje!
Igama elingukhiyeamakhukhi ophaya we-apula InkamboUgwadule KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
Nazi ezinye izindlela ongazithanda
* Pecan Pie Cookies * Ama-Apple Pie Roll Ups * I-Apple Pie Egg Rolls *
Le recipe yaphefumulelwa yi-Building Buttercream's Amakhukhi we-Blueberry Pie ! Ezakhe zisuka ekuqaleni futhi zibukeka zimangalisa!